Magacyada 242- Xildhibaan oo goor dhow lagu dhawaaqayo
Saacadaha soo aadan ayaa lagu wadaa in gudiga farsamada ay ay ku dhawaaqaan magacyada 40 xildhibaan oo kamid noqon doona 202 xildhibaan oo ay horay liiskooda ugu dhawaaqeen gudiga,taasoo tirada guud kadhigi doonta 242 mudane.
Hadii lagu dhawaaqo liiskan kakooban 242 waxay taas kadhigantahay in uu buuxsamay kooramkii loga baahnaay ineey doortaan gudoomiyaha baarlamanka,iyo madaxweynahaba.
Beri ayaa lagu wadaa ineey xildhibaanada cusub isugu yimaadaan kulankooda ugu horeeyay,waxaana shir gudoomin doona mudanaha ugu da’da ween.
Dhanka kale Kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee ku shirsan Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen arimaha soo xulista baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa guddiga xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed waxa ay dhaliileen qaabka dib loogu soo xulay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan guddiga farsamada ay shaaciyeen inaysan kamid noqoneyn baarlamaanka.
Garaad Jaamac Garaad Cali oo ah Guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka oo ugu horeyn saxaafada la hadlay ayaa wuxuu sheegay inaysan aqbaleyn in shaqsi ay keensadaan odayaasha dhaqanka meesha laga saaro shaqsi masuuliyiinta dowladda ay keensadaana booska la gelsho.
Waxaa xusid mudan in soo xulista xubnaha kamid noqnaya baarlamanka cusub ee Soomaaliya uu kataaganyahay muran iyo is qabqabsi farabadan,iyadoo masuuliyiinta ugu sareeysa doowlada uu mid walibo doonayo in logu soo daro xubno isaga ugaar ah oo uu isleeyahay waxaad kaheleeysaa codad.